Dry simba mumiririri
chinhu About isu
Huixian Tiankai Paper Kuita Agent Co. Ltd iri pamutemo. akazvimirira uye yepamusorosoro zvebhizimisi pamwe hwokugadzira rutsigiro na Chemical Engineering Research kwo Tianjin University of Science & Technology uye Qingdao University of Science & Technology. boka redu unoshanda pasi mugadzi yayo Henan HengLi Industrial Group Co .. Ltd., iyo yakatangwa muna 1997 ....
boka redu unoshanda pasi mugadzi yayo Henan HengLi Industrial Group Co .. Ltd., iyo yakatangwa muna 1997, uye hwakagadzwa muna 2008 pashure zvinonyatsorehwa kuchinja zvinhu Hengli.
Our chikuru zvigadzirwa zvinosanganisira pamusoro sizing nevasori, yakaoma simba vamiririri, muedzo vamiririri, akanyorova simba vamiririri, rosin nevamiririri uye zvakawanda. Uye tinogona kubereka dzimwe mhando kuti zvimwe zvinodiwa zvenyu.
Tiri kuita zvose zvatinogona kuti kuvaka rakasiyana zvebhizimisi yakanaka yemakambani netsika, vakaita ave mureza kusingaperi namakemikari bhizimisi uye vakazvipira sustainrable kukura uye utsanzi.
We paakapiwa $ 5OO.OOO kuwedzera mutsva dzaFord akaoma simba nevasori muna 2014. kuti zvimwe kunatsiridza kambani vedu kukura uye kuvandudza yedu yokutengesa makwikwi ...
19 October 2016 / by
Pemvura Sizing Agent Tkb 002 Paper Chemicals
Organic nesilicon Defoamer SS 30 Paper Chemicals
Surface Sizing Agent , Akd Sizing Agent , Mancozeb 80wp, Styrene Surface Sizing Agent , Aluminium Sulfate In China,